Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Psalms 44
Nepali New Revised Version, Psalms 44
1 हे परमेश्‍वर, हामीले आफ्‍नै कानले सुनेका छौं, हाम्रा पिता-पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्‌, तपाईंले प्राचीनकालमा उनीहरूका समयमा कस्‍ता-कस्‍ता काम गर्नुभयो।
2 तपाईंले आफ्‍नै बाहुलीले जातिहरूलाई धपाएर उनीहरूलाई बसाल्‍नुभयो। तपाईंले मानिसहरूलाई दमन गर्नुभयो, र हाम्रा पिता-पुर्खाहरूलाई वृद्धि गर्नुभयो।
3 उनीहरूले तरवारको बलले देश जितेका होइनन्‌, न त उनीहरूको बाहुबलले उनीहरूले विजय हासिल गरेका हुन्‌। तपाईंकै दाहिने बाहुलीले, तपाईंकै पाखुराले र तपाईंका मुहारको प्रकाशले उनीहरू विजयी भएका थिए, किनभने तपाईंले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्‍थ्‍यो।
4 तपाईं मेरा राजा र परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ, जसले याकूबलाई विजय प्रदान गर्नुहुन्‍छ।
5 तपाईंद्वारै हामी आफ्‍ना विरोधीहरूलाई पछाडि धपाउँछौं। हाम्रा विरुद्धमा उठ्‌नेहरूलाई हामी तपाईंकै नाउँले कुल्‍चदँछौं।
6 आफ्‍नो धनुमा म भरोसा गर्दिनँ, मेरो तरवारले मलाई विजय दिँदैन।
7 तर तपाईंले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूमाथि विजय दिनुहुन्‍छ, र हाम्रा विरोधीहरूलाई शर्ममा पार्नुहुन्‍छ।
8 परमेश्‍वरमा नै हामी निरन्‍तर गर्व गर्छौं र सदा तपाईंकै नाउँको प्रशंसा गर्नेछौं। सेला
9 तर अब तपाईंले हामीलाई त्‍यागेर हामीलाई दीन तुल्‍याउनुभएको छ, र तपाईं हाम्रा सेनाहरूलाई साथ दिनुहुन्‍न।
10 तपाईंले हामीलाई शत्रुहरूबाट पछि हट्‌ने तुल्‍याउनुभएको छ, र हाम्रा विरोधीहरूले हामीलाई लुटेका छन्‌।
11 तपाईंले अरूको आहार हुन भेड़ाहरूजस्‍तै हामीलाई त्‍यागिदिनुभएको छ, र जाति-जातिहरूका बीचमा हामीलाई तितरबितर पार्नुभएको छ।
12 तपाईंले आफ्‍नो प्रजालाई नाम मात्रको मूल्‍यमा बेच्‍नुभएको छ, र तिनीहरूको बिक्रीबाट तपाईंलाई कुनै लाभ भएको छैन।
13 हाम्रा छिमेकीहरूका सामुन्‍ने तपाईंले हामीलाई निन्‍दाको पात्र बनाउनुभयो, हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूका बीचमा हामीलाई तिरस्‍कार र उपहासको पात्र बनाउनुभएको छ।
14 जातिहरूका बीचमा तपाईंले हामीलाई हाँसोको नमूना हुन दिनुभएको छ, मानिसहरूले हामीलाई देखेर मुन्‍टो हल्‍लाउँछन्‌।
15 मेरो अपमान दिनभरि मेरो सामुन्‍ने रहन्‍छ, र मेरो मोहड़ा शर्मले ढाकिएको छ।
16 गिल्‍ला गर्ने र खिसी गर्नेहरूका वचनहरूले र प्रतिशोध गर्ने शत्रुहरूका कारणले मलाई यस्‍तो भएको छ।
17 हामीले तपाईंलाई नबिर्से पनि, र तपाईंको करारप्रति झूटा नभए तापनि यी सबै हामीमाथि परिआएका छन्‌।
18 हाम्रा हृदय तपाईंबाट विमुख भएका छैनन्‌, तपाईंको मार्गबाट हाम्रा पाइलाहरू चुकेका छैनन्‌।
19 तर तपाईंले हामीलाई चूर पारेर स्‍याल बस्‍ने पाखातुल्‍य बनाउनुभयो, र हामीलाई घोर अन्‍धकारले ढाक्‍नुभयो।
20 यदि हामीले हाम्रा परमेश्‍वरको नाउँ बिर्सेका भएदेखि वा अन्‍य देवदेवतातिर हाम्रा हात पसारेका भएदेखि,
21 के परमेश्‍वरले यो थाहा पाउनुहुनेथिएन र? किनकि उहाँले हृदयका गुप्‍त कुरा जान्‍नुहुन्‍छ।
22 तापनि तपाईंको खातिर हामी दिनभरि मारिन्‍छौं, काटिने भेड़ाहरूजस्‍तै हामीहरू गनिएका छौं।
23 उठ्‌नुहोस्‌ परमप्रभु, तपाईं किन सुत्‍नुहुन्‍छ? जाग्‍नुहोस्‌, हामीलाई सदाको निम्‍ति नत्‍याग्‍नुहोस्‌।
24 तपाईं किन आफ्‍नो मुहार लुकाउनुहुन्‍छ, र हाम्रा दु:ख र हामीमाथिको थिचोमिचो बिर्सनुहुन्‍छ?
25 हामी त धूलोमै मिलिसकेका छौं, हाम्रा शरीर माटोमै टाँसिसकेका छन्‌।
26 उठ्‌नुहोस्‌, हामीलाई गुहार गर्नुहोस्‌, तपाईंको कहिले नटुङ्गिने प्रेमको कारण हाम्रो उद्धार गरिदिनुहोस्‌।
Psalms 43 Choose Book & Chapter Psalms 45